ဘေဘီလေးကို သာကူကျွေး လို့ရလား ...... - Hello Sayarwon
နေ့လယ်နေ့ခင်း အချိုတည်းဖို့ဆိုပြီး သာကူကို ကန်စွန်းဥလေး ထည့်ပြီး ထန်းလျက်လေးနဲ့ ကျိုထားတာကို စားမယ်ဆိုပြီး ထိုင်လိုက်တုန်း ဘေဘီလေးက တီတီ ဘာကြီးလဲ….. သားသားလည်း စားမယ်ဆိုလို့ ကျွေးလည်း ကျွေးချင်တယ်။ တည့်ရော တည့်ရဲ့လား။ စားလို့ ရပါ့မလားဆိုပြီး တွေးနေမိပြီလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ဘေဘီလေးကို သာကူကျွေး လို့ရလား …… ဆိုတဲ့ အဖြေကို သိနိုင်ဖို့ ဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ဦးနော်။
သာကူက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ရဲ့လား….
သာကူဆိုတာက ပီလောပီနံကနေ ထုတ်ထားတာပါ။ သဘာဝ အရင်းအမြစ်ကနေ ထုတ်ထားတဲ့ စားစရာ တစ်ခုပါ။ သာကူမှာပါတဲ့ ကစီဓာတ် နဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေက သန့်စင်တဲ့ အာဟာရ အရင်းအမြစ်ပါ။
ဒီအာဟာရ အရင်းအမြစ်က ကလေးတွေအတွက် အရေးပါပါတယ်။ သာကူမှာ ပါတဲ့ အာဟာရဓာတ်က ဘေဘီလေးတွေရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အထောက်အကူပေးပါတယ်။
ဘေဘီလေးကို ဘယ်အချိန်မှာ သာကူကျွေး မလဲ….
ဘေဘီလေးက အသက် ၇ လ ပြည့်ပြီးပြီဆိုရင် သာကူ စကျွေးလို့ ရပါပြီ။ သာကူကို မျက်စေ့ ပျောက်အောင် ကျိုပြီး နို့နဲ့ တွဲဖက်ကျွေးလို့ ရပါတယ်။ သာကူက ဘေဘီလေးနဲ့ တည့်တဲ့ အစားအစာ တစ်ခုဆိုပေမယ့် သာကူနဲ့ ဓာတ်မတည့်တဲ့ ဘေဘီလေးတွေလည်း ရှိနိုင်တာကြောင့် အရင်ဆုံး နည်းနည်းလေး စကျွေးပါ။
တကယ်လို့ ဘေဘီလေးက အရေပြားမှာ အနီစက်တွေ ထွက်မယ်။ ပါးစပ်တွေ ယားမယ်။ နှုတ်ခမ်းတွေ ရောင်မယ်။ ဗိုက်အောင့်မယ်။ အော့အန်မယ်ဆိုရင်တော့ ဆက်မကျွေးဖို့ ပြောပါရစေ။
ဘေဘီလေးကို သာကူကျွေး တဲ့အခါ
ဘေဘီလေးကို သာကူကျွေးတဲ့အခါ အခုလိုမျိုး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
သာကူမှာ အသီးအရွက်ကနေ ရရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ပရိုတင်း ပါဝင်နေပြီ ဘေဘီလေးရဲ့ ကြွက်သားတွေ ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
သာကူမှာ ပရိုတင်းပါဝင်သလို ကယ်လ်ဆီယမ်လည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ဘေဘီလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့ အရှိန်ယူနေချိန်မှာ အရိုးတွေ သန်မာစေဖို့အတွက် ကယ်လ်ဆီယမ်ကို လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘေဘီလေးရဲ့ အရိုးတွေ သန်မာစေဖို့ လိုအပ်တဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ် ပြည့်ဝစေဖို့ ဆိုရင် သာကူ ကျွေးပေးလို့ ရပါတယ်။
သာကူမှာ ပိုတက်ဆီယမ် ပမာဏ များစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် သွေးပေါင်ကို ထိန်းညှိပေးပြီး သွေးစီးဆင်းမှု ကောင်းစေပါတယ်။ နှလုံးသွေးကြောစနစ်ကို ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ သွေးစီးဆင်းမှု ကောင်းစေဖို့ ဘေဘီလေးကို ပုံမှန် ကျွေးပေးလို့ ရပါတယ်။
ကစီဓာတ် ကြွယ်ဝတဲ့ သာကူက ဘေဘီလေးကို အဆီ နဲ့ ကြွက်သားတွေ ဖြစ်စေဖို့ ထောက်ကူပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးက ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် မရှိဘူးလို့ ယူဆမယ်ဆိုရင် သာကူကျွေးပေးလို့ ရပါတယ်။
သာကူမှာ သန့်စင်တဲ့ ကစီဓာတ် နဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်နေသလို အမျှင်ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေမှုက အူတွင်းက အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားတွေကို ကျန်းမာစေပြီး အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ ဘေဘီလေးကို ဝမ်းချုပ်မှု ကင်းစေဖို့ ထောက်ကူပေးပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်တယ်
သာကူမှာ ဘေဘီလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အေးမြစေနိုင်တဲ့ အာနိသင် ရှိပါတယ်။ သာကူက ဘေဘီလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်မယ့် အခြေအနေ တစ်ရပ်မှာ ထိန်းထားပေးပါတယ်။
ဒါတွေအပြင် သာကူက ဘေဘီလေးကို ဆံသား နဲ့ အရေပြား ကျန်းမာစေဖို့လည်း အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
ကဲ….. ဘေဘီလေးကို သာကူကျွေးလို့ ရလား …… ဆိုတာကို အဖြေထွက်ပြီ ထင်ပါတယ်နော်။
Sabudana (Sago) for Babies – Benefits and Recipes https://parenting.firstcry.com/articles/sabudana-sago-for-babies-benefits-and-recipes/ Accessed Date 17 August 2021
Can I give my baby Sabudana? https://www.mylittlemoppet.com/can-i-give-my-baby-sabudana/ Accessed Date 17 August 2021